စိတ်ကူးပျော်ရာ: မမ၀၀တို့ လှလှပပဖြစ်စေဖို့ 
မမ၀၀တို့ လှလှပပဖြစ်စေဖို့ 
ကျွန်တော်တို့ ရေးသားခဲ့သောဆောင်းပါးများတွင် အချို့က အမျိုးသမီး လေ့ကျင့်ခန်းများ နည်းပါးသည်ဟု ပြောကြပါသည်။ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်သည်လည်း အမျိုးသမီး လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသားမှု နည်းသည်မှာ မှန်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုနိုင်ဦးရေးသားသော လေ့ကျင့်ခန်းသီအိုရီများသည် အမျိုးသား များ အတွက်သာမက အမျိုးသမီးများ အတွက်ပါ ကြားထိုး ရေးသား တင်ဆက်ပေးမှုများရှိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ( ၂ ) ဦး နားလည်မှု ယူပြီး ကျွန်တော် လေ့ကျင့်ခန်း ဆောင်းပါးများ ရှောင်ရှားခြင်း မဟုတ်ပါ။ထို့ကြောင့် ယခု ဆောင်းပါးသည် အမျိုးသမီး အဆီများသူများအတွက် အကျိုးပြုမည့် လေ့ကျင့်ခန်း ပရိုဂရမ် တစ်ခု ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာအလှသည် “တင်-ရင်-ခါး” အချိုးအစားညီညွတ်မှုပေါ်တွင် တည်သည်ဟု ယေဘုယျ နားလည်ထားကြပါသည်။ ပြောရလျှင် အောက်ပိုင်း ပေါင်ကြွက်သား ပြည့်ဖြိုး ကျစ်လစ်မှုလည်း ပါဝင်သဖြင့် “ပေါင်-တင်ပါး-ရင်သားနှင့် ခါးအလှ အချိုးအစားကြမှ” ဟု ဆိုရပါမည်။ထို့ကြောင့် ယခု လေ့ကျင့်ခန်းသည် ပေါင် ၊ တင် ၊ ရင် ၊ခါး၊ အတွက် ဦးစားပေး လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါသည်။
“ပေါင်-တင်-ရင်-ခါး” အချိုးအစားမကျလျှင် အမျိုးသမီးတို့၏ ကိုယ်လုံးအလှသည် ပုံစံမကျတော့ပါ။ ကိုယ်လုံးအလှ အချိုးအစားမကျသော အမျိုးသမီးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် သုံးမျိုးရှိကြောင်း သတ်မှတ် ထားပါသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် “အို-အေ-တီ” (O-A-T) ပုံစံများဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
အို-ပုံစံသည် ၀ဖိုင့်ဖိုင့် ရှိပြီး ၀လုံးပုံစံနှင့် တူသည်။
အေ-ပုံစံသည် အောက်ပိုင်းကားပြီး အပေါ်ပိုင်းကျဉ်းသည်။
တီ-ပုံစံသည် အပေါ်ပိုင်းကားပြီး အောက်ပိုင်းသေးသည်။
အိုပုံစံ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစား မပြေပြစ်သူများအတွက် အလေးဖြင့် ကိုယ်ကာယအလှလေ့ကျင့်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများအတွက် ဦးစားပေးပြုလုပ်သင့်သော လေ့ကျင့် ခန်းများနှင့် အကြံပေးချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
“အို” ပုံသဏ္ဍာန်ကိုယ်လုံး၏ ထင်ရှားသောလက္ခဏာများ
ကိုယ်အလေးချိန်များပြီး ၀,သည့် အသွင်ရှိသည်။ မေးရိုးမပေါ်လွင်ဘဲ (အဆီဖြင့်ဖုံးနေပုံ) ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ပွယောင်းလောင်း အနေအထားတွင်ရှိသည်။ များသောအားဖြင့် ရင်သားကြီးထွားသည်။ နောက်ကျောသားများ အလွန်ထူပြီး လုံးဝိုင်းဝိုင်းရှိသည်။ လက်မောင်းများတုတ်သည်။ ဘေးမှကြည့်လျှင် ဗိုက်ပူနေပုံကို တွေ့ရသည်။ အထင်ရှားဆုံး ပြင်ပလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၀မ်းဗိုက်အောက်သား၊ ဆီးပုန်းဖေါင်း နေသည်။ တင်ပါးဆုံနှင့် ပေါင်အတွင်းသားတို့ တစ်သားတည်း အဆီများသည်။ ခြေသလုံးများကြီးထွား သည်။
“အို” ပုံသဏ္ဍန်ကိုယ်လုံးရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အစားအသောက် စည်းကမ်းမကောင်းဘူး။ မဆင် မခြင်စားတတ်တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုံးဝမလုပ်ကြသူတွေများတယ်။ သူတို့အဖို့ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းစပြီး လုပ်ရမလဲဆိုတာကို တွေးပြီး စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
သူတို့ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအဆီလျော့ကျအောင် ရှေးဦးစွာလုပ်ဖို့ အာရုံစိုက်ကြရမယ်။ ပြီးတော့မှ ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားပြေပြစ်မှုအတွက် ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပိုပြီးဦးစားပေးလေ့ကျင့် ရမလဲဆိုတာ ဆက်ပြီးလုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်။
(၁) ပက်လက်အိပ်ခြေကန် (Leg Press)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ တင်ပါးကြွက်သားများကို အလုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် ခြေနှစ်ဖက်ကို တစ်ပေခွဲခန့်ခွဲပြီး ခြေဖျားများကို အပြင်ဖက်သို့ အနည်းငယ် လှည့်ထားပြီးကန်ပါ။
ခြေထောက်ဖြင့်ကန်ရာတွင် “ခြေဖျားပိုင်းဖြင့်” မကန်ဘဲ “ခြေဖနောင့်အား” ဖြင့် တွန်းကန်ပါ။
တင်ပါးနှင့် ပေါင်အဆီများကျစေရန်အတွက် အလေးများများမထည့်ဘဲ အနေတော်အလေး (သို့မဟုတ်) အလေးပေါ့ပေါ့ထည့်ပြီး အကြိမ်များများကစားပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို (၁၂)ကြိမ် x (၃)ကျော့လောက်ကစားပြီး (၁၅-၂၀)ကြိမ် x (၃-၄)ကျော့အထိ ကစားနိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောင်းပြန်အောက်ပိုင်းထိုင်နည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ရှုထုတ်ပုံမှာလည်း အောက်ပိုင်းထိုင်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့“ရှူ-အောင့်-ညှစ်-ထုတ်” နည်းကိုပဲ အသုံး ပြုပါ။
မှတ်ချက် အားကစားရုံအတွင်းမှာ ခြေကန်ခုံမရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ မိမိအိမ်တွင်ကစားလျှင်ဖြစ်စေ “ဘားတို ဖြင့် ထိုင်ထ” (Dumbell Squat) လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြောင်းလဲကစားနိုင်သည်။
(၂) ၀မ်းလျားမှောက် ပေါင်တွင်းကွေး (Leg Curls)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ပေါင်အတွင်းကြွက်သားများအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ပေါင်တွင်းသားတွေအတွက် အထိရောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဆီလျော့ချလိုသူတွေအတွက် အလေးများများမထည့်ဘဲ အနေတော် (သို့မဟုတ်) အလေးပေါ့ပေါ့ဖြင့် (၁၅x၂၀)ကြိမ် x (၃-၄)ကျော့ ကစားနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်။
ရိုးရိုးကစားပုံကတော့ ခုံပေါ်မှာ ၀မ်းလျားမှောက်အနေအထားကနေပြီး ပေါင်တွင်းကြွက်သား ခွန်အားနဲ့ ပေါင်ကိုအစွမ်းကုန်ကွေးပြီး “အပြည့်” ကစားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါင်တွင်းသားအဆီကျရန် အတွက် “အပြည့်” နဲ့ “တစ်ဝက်” တစ်လှည့်စီ ပေါင်းကစားနည်းကို အတော်ကျင့်သုံးလာကြတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
အဲဒီလိုပေါင်းပြီးကစားနည်းကတော့ ပထမတစ်ကြိမ်မှာ ပေါင်ကို “အပြည့်” ကွေးတင်ပြီး ဖြည်းဖြည်း ပြန်ချပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ပေါင်ကို “တစ်ဝက်” အထိသာကွေးပြီး ဖြည်းဖြည်းညှစ်ထိန်းခါ ပြန်ချပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ အသက်ရှူထုတ်ခြင်းကို နှစ်သက်သလို လွတ်လပ်စွာ ကစားနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ပေါင်တွင်းကွေးကစားသော ကိရိယာ မရှိခဲ့လျှင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး လက်တစ်ဖက်က တစ်ခုခု ကို ကိုင်ခါ ပေါင်တစ်ဖက်ချင်း တစ်လှည့်စီ နောက်ကိုကွေးတင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (Standing One Leg Curl) ကို ကစားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တဲ့အတွက် အနည်းဆုံး (၃၀)ကြိမ် လောက်အထိ (၄-၅)ကျော့ ကစားရပါတယ်။
(၃) ပေါင်ဘေးခွဲထိုင်ထ (Side-to-Side Lunge)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာလည်း တင်ပါးဆုံနဲ့ တင်ပါးဘေးသားတွေအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာက နည်းစနစ်ပိုင်းအရ နည်းနည်းခက်ပြီး “ကိုယ်ခန္ဓာအချိန်အဆ” (Body Balance) ထိန်းရတာမလွယ်ဘူး။ ဒါကြောင့်အစမှာ ကိရိယာလွတ်ဖြည်းဖြည်းလေးစပြီး လုပ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ အလေးကိုင်ကစားတဲ့အခါမှာလည်း အလေးပေါ့ပေါ့သာကိုင်ပြီး ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဘေးတိုက်သုံးလေးပေလောက် ခွဲထုတ်ပြီးထိုင်ချလိုက်ပါ။
ထိုအနေအထားမှ ပြန်ထပြီး ခြေနှစ်ဖက်ပြန်စုရပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ တစ်ခြားခြေထောက်ကို ပြောင်းလုပ်ပါ။ တစ်ဖက်တစ်ကြီမ်စီ တစ်လှည့်စီပြောင်းလုပ်ပါ။ (ခြေထောက်ရှေ့နောက်ခွဲထိုင်ထ လေ့ကျင့်ခန်းကလည်း ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေတစ်ဖက်စီအတွက်ကစားရမယ့် အကြိမ်ပြတ်အောင်လုပ်ပြီးမှ ကျန်တဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ပြောင်းကစားရပါတယ်။ မတူပုံကို သတိပြုပါ။)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို စလုပ်တဲ့အခါမှာ နည်းစနစ်အရ အချိန်အဆခက်တဲ့ အပြင်မှာ မကစားဘူး သေးသူများအဖို့ ပေါင်တွင်းကြော၊ တကောက်ကြောတွေ တင်းနေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်မတော်တဆ အကြောတွေ ထိခိုက်နာကျင်မှုမဖြစ်စေရအောင် “ကိရိယာလွတ် ဖြည်းဖြည်းနှေးနှေးလေး စကစားပါ။” လို့ သတိပေးချင်တယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြောလျှော့လိုတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ .. အောက်ပိုင်းထိုင်ထ .. အောက်ပိုင်းပက်လက်အိပ် ခြေကန်လေ့ကျင့်ခန်းတွင် မကစားခင်မှာ သွေးပူအကြော့လျှော့လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် ကစားသင့်တယ်။
(၁) ထိုင်လျက်ခါးလှည့် (Seated Twist)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ခါးဘေးနဲ့ ခါးဘေးနောက်က အဆီတွေကျစေပြီး ခါးသေးစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်တယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို အဆီလျှော့လိုသူတွေ တစ်ပတ်အနည်းဆုံး (၅) ကြိမ်လောက် ကစားသင့် ပါတယ်။
ပခုံးပေါ်မှာ အလေးတန်သံချောင်းတင်ပြီး ခုံလွတ်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ပါ။ ဦးခေါင်းကို ရှေ့တည့်တည့်် ကြည့်ပြီး တတ်နိုင်သမျှငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။ ပြီးတော့ ခါးကို တစ်ဖက်ချင်းအစွမ်းကုန်လှည့်ပါ။ လှည့်တဲ့အခါမှာ ပခုံးအား၊ လက်အား၊ အလေးတန်အားအရှိန်ဖြင့် မလှည့်မိပါစေနဲ့။ ၀မ်းဗိုက်ဘေးကြွက်သားများ (Oblique Muscles) အားကိုပြုပြီးလှည့်ပါ။ နှစ်ဖက်ပေါင်းလှည့်ပြီးတာကို (၁)ကြိမ်လို့သတ်မှတ်ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အနည်းဆုံးအကြိမ် (၅၀)က (၁၀၀)အထိ သုံးလေးကျော့ကစားပါ။ အစမှာဝါးလုံး တစ်ချောင်း (သို့မဟုတ်) မတ်တတ်ရပ်တံမြက်စီးရိုးတစ်ချောင်းကို အသုံးပြုပြီး စကစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(၂) မတ်တတ်ရပ်ခါးဘေးကိုင်း (Standing Side Bend)
အထက်ကလေ့ကျင့််ခန်းနဲ့တွဲပြီး ခါးဘေးသားအဆီတွေကျအောင်ကစားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ မတ်တတ်ရပ်ပြီး ပခုံးပေါ်မှာ ၀ါးလုံးတစ်လုံး (သို့မဟုတ်) အလေးတန်သံချောင်းထမ်းပြီး ခါးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကို တစ်လှည့်စီခါးဘေးကိုင်းချတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း (Standing Side Bean) ဖြစ်လာ တယ်။ ခါးတုတ်သူများ ခါးအဆီများသူဟာ “ထိုင်လျက် ခါးလှည့်” နဲ့ “မတ်တတ်ရပ်ခါးဘေးကိုင်း” လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်ခုတွဲပြီး များများကစားသင့်ပါတယ်။
(၃) ၀မ်းဗိုက်ချပ် လေမှုတ်ထုတ် (Abdominal Vacuum)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေပျော့ပြောင်းစေတဲ့ ၀မ်းဗိုက်ချုပ်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခြေနှစ်ဖက်၊ လက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီး ခေါင်းငုံ့ထားပါ။ ထိုအနေအထားတွင် နေပြီး လေကိုပါးစပ်မှ ဆက်တိုက်ရသမျှ အားကုန်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပါ။ လေအားလုံးကို မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးချိန်တွင် ၀မ်းဗိုက်ကို အစွမ်းကုန်ရှိုက်ချပ်ပြီး (၁၅-၂၀) စက္ကန့်ခန့်ကြာ အသက်အောင့်ထားပါ။
နောက်တစ်ကြိမ် လေများမှုတ်ထုတ်ပြီး (၁၅-၂၀)စက္ကန့်ကြာ ဗိုက်ရှပ်အသက်အောင့်ခြင်း ထပ်မံ ပြုလုပ်ပါ။
စုစုပေါင်း (၁၅-၂၀) စက္ကန့်x (၄-၅) ကျော့ပြုလုပ်ပါ။
အရန်လေ့ကျင့်ခန်းများ (Optional Exercises)
(၁) မတ်တတ်ရပ်စက်ဖြင့် ပေါင်တွင်းကွေး
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ၀မ်းလျေားမှောက်ပေါင်တွင်းကွေး လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်် မတ်တတ်ရပ်ပေါင်တွင်းကွေး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါင်နှစ်ဖက်ကို စုကွေးလို့မရနိုင်ဘူး။ ခြေထောက် တစ်ဖက်ချင်း တစ်လှည့်စီ (၁၅-၂၀)ကြိမ်x(၃)ကျော့ကစားပါ။
(၂) မျဉ်းပြိုင်အောက်ပိုင်းထိုင်ထ (Paralblet Squat)
အောက်ပိုင်းထိုင်ဖို့ တန်းညှပ်ထိုင်ထကိရိယာနဲ့ ကစားရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပိုင်း ထိုင်တဲ့အခါမှာ အောက်အဆုံးအထိ ထိုင်မချပဲ ပေါင်များနဲ့ ကြမ်းပြင် မျဉ်းပြိုင်အနေအထားအထိ တစ်ဝက်သာ ထိုင်ချရပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ပေါင်ကြွက်သားများကို ကျစ်လစ်သန်မာစေတဲ့အတွက် အစွမ်းကုန်နိုင်တဲ့ အလေးထည့်ပြီး (၁၀-၁၂)ကြိမ်x(၃)ကျော့ပဲ ကစားရပါမယ်။
(၁) ခုံစောင်းမှီ ဘားတိုအနှေးမ (Incline Dumbell Press)
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ခွက်နေတဲ့ ရင်အုပ်အပေါ်ပိုင်းကို ပြည့်စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်။
၃၀ ဒီဂရီခန့်ရှိတဲ့ ခုံစောင်းတစ်ခုပေါ်မှာ မှီအိပ်ပါ။
ဘားတိုဒမ်ဘယ်နှစ်ခုကို ပခုံးပေါ်မှာ မျဉ်းဖြောင့်တစ်ခုတည်း အနေအထားကျအောင် ဆုတ်ကိုင်ပါ။ လက်ဖ၀ါးဆုပ်က အပြင်ဖက်သို့ မျက်နှာမူနေရမယ်။
ထိုအနေအထားမှ ပက်လက်အိပ်အနှေးမအတိုင်းအပေါ်သို့ လက်တစ်ဆန့်ရောက်သည်အထိ တွန်းတင်ပါ။ အသက်ရှူနည်းကို “ရှူ-အောင့်-ညှစ်-ထုတ်” နည်းအတိုင်းကစားပါ။ ဖြည်းဖြည်းညှစ်မ, ဖြည်းဖြည်းညှစ်ပြန်ချပါ။
(၁၀)ကြိမ်x(၃)ကျော့မှစပြီး (၁၂)ကြိမ်x(၃)ကျော့ရလာလျှင် အလေးတိုးခါ ၁၀x၃ မှပြန်စပါ။
ကိုယ်ခန္ဓာအဆီ (Bodfat)ကို ကိုယ်အလေးချိန်၏ (၁၈)%အောက်သို့ လျော့ချနိုင်ရန် ရည်းမှန်းချက် ထားပါ။ (သို့သော်လည်း ၁၀%ထက် မလျော့နည်းပါစေနှင့်) ကိုယ်အလေးချိန်ကို တစ်ဖြည်းဖြည်း လျော့ချသွားပါ။ တစ်ပတ်လျှင် (၁)ပေါင်-(၂)ပေါင်ထက် ပိုမလျော့ချပါနှင့်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် နံနက်ခင်းအိပ်ရာမှ နှိုးပြီးနောက် စောစောကစားပါ။ (ကိုယ်ခန္ဓာအဆီပိုကျလွယ်သည်။) ကိုယ်အလေးချိန်ကို (Body Weight) တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် မှန်မှန်ချိန်ပြီးမှ မှတ်တမ်းထားပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လေ့ကျင့်ခန်းများ (Shape-Shifting Exercises)ကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက်ခြား (၃)ကြိမ်ကစားပါ။
မိမိ၏လေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းများကိုထည့်ပြီး တစ်ပတ်လျှင် (၃)ကြိမ်ကစားပါ။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများကို စတင်ကစားသော လူသစ်များသည် (၁၀-၁၂)မိနစ်ကြာ စတင်ကစားပါ။ ၄င်းနောက်အပတ်စဉ် (၂)မိနစ်ခန့်တိုးပြီး ကစားသွားပါ။ ထိုနည်းဖြင့် (၂၀-၃၀)မိနစ်အထိ မနားတမ်း ဆက်တိုက် အမောခံချွေးပြန်သည်အထိ ကစားသွားနိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။ အမောဆို့လျက် ဇွတ်အတင်း ဆက်ပြီးကစားခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
မိမိ၏အသက်အရွယ်လိုက်၊ မိမိ၏နှလုံးခုန်နှုန်း MHR (ခေါ်) Maximum Heart Rate ၏ ၇၀%
MHR အစွမ်းကုန်နှလုံးခုန်နှုန်း တွက်ချက်နည်းပုံသေဖော်မြူလာနည်းမှာ (၂၂၀-မိမိအသက်) ဖြစ်သည်။ အသက် (၃၀)အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ “လေ့ကျင့်မှုနှလုံးခုန်နှုန်း” THR (ခေါ်) Training Heart Rate ကို တွက်လိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်မှုနှလုံးခုန်နှုန်း = အစွမ်းကုန်နှလုံးခုန်နှုန်း x ၇၀%
= (၂၂၀-အသက်) x ၇၀%
= (၂၂၀-အသက်) x .၇
= ၁၉၀ x .၇
ထို့ကြောင့် ထိုအမျိုးသမီးသည် တစ်မိနစ်လျှင် “လေ့ကျင့်မှုနှလုံးခုန်နှုန်း” (၁၃၃)ကြိမ်ထက် ပိုမကစားသင့်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားပြီးလျှင် “ဘယ်ဖက်လက်ကောက်ဝတ် သွေးကြော (သို့မဟုတ်) လည်ပင်းသွေးကြောကို ညာဖက်လက်ချောင်းလေးများဖြင့် သာသာဖိပြီး (၁၅) မိနစ်အတွင်း သွေးခုန်နှုန်းကိုမှတ်ပါ။ ဥပမာ (၃၃) ကြိမ်ရလျှင် တစ်မိနစ်နှုန်းအတွက် (၄)ဖြင့် မြှောက်ပါ။ တစ်မိနစ်လေ့ကျင့်မှုနှလုံးခုန်နှုန်း ၃၃x၄ = (၁၃၂) ကြိမ်ရပါလိမ့်မည်။ နှလုံးခုန်နှုန်း အနည်းအများပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ခွန်အားစိုက်ထုတ်လေ့ကျင့်မှု (Lntensity) သို့မဟုတ် အလေးဝန်များ အတိုးအလျော့ ချင့်ချိန် ပြုလုပ်ပါ။
အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်မှုကို (၃၀)မိနစ်အထိ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကစားနိုင်ပြီဆိုလျှင် အဆီပိုမိုကျစေရန် အတွက် အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်မှုအရှိန်ကို မြှင့်တင်ယူပါ။
ကိုယ်ကာယနှင့် အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်မှု အနည်းဆုံး (၃)လအထက်ကြာပြီး ကျွမ်းကျင်စွာကစားတတ် လာလျှင် အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်မှုကို တစ်ချိန်လျှင် (၃၀-၄၅)မိနစ်အထိ အရှိန်မြှင့်ကစားနိုင်ရန် အစီအစဉ် ချမှတ်ပါ။ တစ်ပတ်လျှင် (၄)ကြိမ်မှ (၅)ကြိမ်အထိ တိုးပြီးကစားပါ။
ကိုယ်ခန္ဓာအဆီလျော့ချမှုအတွက် လေ့ကျင့်မှုကာလအတွင်း တစ်နေ့တာအတွက် အစားအစာများ ကို မွန်းမတည့်မီ နံနက်ပိုင်းတွင် ပိုစားပါ။ မွန်းလွဲပြီးနောက် ညနေပိုင်း ပိုနီးလေ ပို၍လျှော့စားရန် လေ့ကျင့် ယူပါ။
အိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်အတွင်း စားသောက်မှု လုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်။
“ကိုယ်ကာယပြောင်းလဲမှုလေ့ကျင့်ခန်းများ” နှင့် “အေးရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများ” ကို အချိန်ခွဲ ကစား ပါ။ တစ်ခုကို နံနက်ပိုင်းတွင်ကစားပြီး ကျန်တစ်ခုကို ညနေပိုင်းတွင် ကစားပါ။ (သို့မဟုတ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တစ်ရက်ခြားစီ ပြုလုပ်ပါ။)နောက်ထပ်လည်း အလျဉ်းသင့်ရင် အမျိုးသမီး အဆီကျ စားသောက်နည်း ပရိုဂရမ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် တင်ဆက်ပေးရန်ရှိပါသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 6/21/2015 03:41:00 AM
ကမ္ဘာ့အပြေး အကောင်းဆုံး သက်ရှိ
ခွန်အားစိုက်ကစားခြင်း (Intensity Training)
ချမ်းသာမှုနဲ့ ဆင်းရဲမှုကို ကွာခြားစေတဲ့ အမူအကျင့် ၂၁...
လူ့အသက်တွေကို ကယ်ဆယ်ပေးမယ့် Samsung ဖောက်ထွင်းမြင်...
ဘာ့ကြောင့် အသက် ၃၀နားကပ်မှ အိမ်ထောင် ပြုသင့်တယ်ဆို...
ကူးစက်ရောဂါရှိလျှင် အရောင်ပြောင်းသွားမည့် ကွန်ဒုံး...
ငွေကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲ အသုံးချမလဲ
ကားလမ်းပေါ်က ချိုင့်ခွက်ထဲမှာ မိကျောင်းအတုတစ်ကောင် ...
ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသော အကျိုး ၈ မျိုး
ကာယဗလအတွက် Jay Cutler ပြောသောအရေးပါသောအချက်-10ချက်...
Selfie ရိုက်ရင်း ကိုယ့်ခေါင်းကိုယ် သေနတ်နဲ့ ပစ်မိတ...
သင့်ကိုယ်တိုင် ဝဘ်ဆိုဒ် အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရတဲ့ ဝဘ်ဆ...
အမျိုးသားတွေ အတွက် အရေးကြီးဆုံးက ဘာလဲ?
အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ရသူများ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများနု...
ဂျာမနီနိုင်ငံက ပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားသော အပူပိုင်း ကမ်း...
၉၈ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ လက်ကိုင်အိတ်ကောက်ရသူ ပြန်လ...
လူတွေအမေးများတဲ့ Fitness မေးခွန်းများနှင့်ဗယ်လီအြေ...
လုပ်ငန်းခွင်စိတ်ဖိစီးမှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် နည်းလမ...
ကန်ဒေါ်လာ ၂သိန်းကျော်တန် Aple ကွန်ပြူတာကို အမှိုက်ပ...
ပဲရစ်မြို့က ချစ်သူတံတားပေါ်မှာ သော့များကို ဖြုတ်ပြီ...
မိန်းကလေးတွေအသဲစွဲ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ လူမှုကွန်...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ နံနက်ပိုင်းပျို့အန်လိုမှုကို တိုက်ဖျ...
B612 app နဲ့ selfie အလန်းဆွဲမယ်
မိုးရာသီမှာ လုပ်သင့်တဲ့ အရေပြား ထိန်းသိမ်းနည်းလေးေ...
မားစ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သော အချက်အလက်များ
နှလုံးရောဂါ အတွက် သိသင့်သော အရေးကြီး လက္ခဏာ သုံးရပ်...
အူရောင် ငန်းဖျား ရောဂါ (Typhoid Fever)
ဂျပန်လူမျိုးတွေ ဂရင်းတီးကို သောက်တဲ့အပြင် ဘာကြောင်...
ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တိုင်း မျက်နှာမငယ်ပါနဲ့
လက် ၄ မျိုး
ဖခင်များနှင့် အတူနေရသည့် ကလေးငယ်က ဥာဏ်ရည်ပိုမြင့်မ...
ကျောင်းတက်ရင်း စာအိတ် လုပ်ရောင်းရမှ တစ်နှစ် ပေါင် ...
အလကားပေးလျင်တောင် ယူသူမရှိတော့သည့် ဇင်ဘာဘွေငွေ
သင့်ကို နွမ်းနေတဲ့ပုံ ပေါက်စေမယ့် သင်မသိသေးတဲ့ အြေ...
တစ်နေ့ အချိုရည်တစ်လုံးသောက်ရုံနဲ့ ဒီလိုရောဂါတွေ သင...
ဆယ်ကျော် သက်တို့ အုပ်ထိန်းသူနှင့် ပွင့်ပွင့် လင်းလ...
တစ်ညလောက် အိပ်ရေးပျက်ခြင်းသည်ပင် ခန္ဓာကိုယ် အိုမင်း...
ရှူးရှူးတစ်ခါပေါက် တစ်ရူပီး ရ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ပါရာစီတမော သောက်သုံးမိပါက မွေးလ...
ဂန္ထ၀င်ဂီတ နားဆင်ပါက သွေးတိုး ကျစေ နိုင်စွမ်းရှိ
တကယ် လက်တွေ့ဘဝက တာဇံမလေး
နှစ်ဦးသား ရွှေလက်တွဲပြီးသွားသူတို့ရဲ. အချစ်စာတိုလေ...
ကလေး ကိုတိုးတက်ချင်စိတ်ရှိအောင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်ရမ...
ကားမောင်းသူများအတွက်.... အန္တရာယ် မသေးသော အသေးစား င...
အင်းလေးကန်ကို ယူနက်စကိုက ဇီဝ အသိုက်အ၀န်း သီးသန့်ြ...
အဖေနှင့် အမေ မသိသေးတဲ့ ကျွန်တော့် အကြောင်း
ဂျက် လီ ပြောပြတဲ့ ငွေတစ်ကျပ်ရဲ့စွမ်းအား
တစ်ချိန်တုန်းက ကယ်ခဲ့ ကလေးမလေး ဘွဲ့ရတဲ့အခါ
မိဘအများစု မှားမှန်းမသိ မှားတတ်သောအမှားများ အိမ်ထေ...
မိန်းခလေးလို ဝတ်လို့ ချစ်သူကိုယ်စား စားမေးပွဲ သွား...
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဦးခေါင်းခွံ အစားထိုး ခွဲစိတ်မှု အောင...
အိမ်ထောင်ရေးမှာ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်း တာဝန်ကျေပွန်သူ ...
ချောမောတဲ့ ရဲကြောင့် ဖမ်းဆီးခံမယ့် အမျိုးသမီး အမျာ...
ဦးနှောက်အကျိတ် ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် ဂီတာတီးနေခဲ့တဲ့ လူ...
မီးတောင်ကို အသားကင် မီးဖို လုပ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်
ဈေးဝယ်သူတို့ သင့်စတိုးဆိုင်မှ လိုချင်တဲ့ အရာတွေ
သားသမီးလေးတွေ ကျောင်းစာများများလုပ်ဖို့ ဘယ်လိုကူညီ...
ရည်းစားမရှိတဲ့ တစ်ကိုယ်တည်း သမားတွေရဲ့ အားသားချက်ေ...